Beelli sababa hongee yeroo dheeraan dhufe Maanguddoota Oromoo afur galaafate - Independent Oromia
Warraaqsi Galaana Uummataa itti-fufee jiraachuu
Yaaballoo: Warraaqsa Barattoota M/B Qophaa’inaa Kum. Jaatanii Aliin geggeeffameen wal-qabatee: Barataan Oromoo tokko wareegamuu; 10’nii ol kanneen ta’anis rasaasaan madaa'uu. Darbees, Barsiisonni Yuunbarsitii, Hayyoonnii seenaa, akkasumas, Oromoonni danuun hidhamaa jiraachuu;
Taltallee: Rakkoo hongee sababa caamaatiin Konyaa Booranaa, Onoota: Taltallee, Mi'oo, Eel-wayyaa fi kanneen biroo keessatti dhalateen, Ona Taltallee keessatti lubbuun Oromoota afurii galaafatamuu, beeladnis gaaga'amaa jiraachuu; Ta'us, aangawoonni Paartii Badhaadhinaa Konyaa sanii rakkoo kana waakkachaa jiraachuu.
Gindhiir fi Naqamtee: Warraaqsi Galaana Uummataa itti-fufee jiraachuu